Akụkọ - Uru nke ngwa nke teknụzụ ọnwụ laser
METAL na-arụ ọrụ Ngwọta
Afọ 17 Emepụta Ahụmahụ
CO2 Laser tingcha osise Machine
Ngwa uru nke laser ọnwụ technology
Laser ọnwụ technology bụ a sara mbara elu-tech technology, nke agwara ngwa anya, ihe ndị ọkà mmụta sayensị na injinịa, ígwè n'ichepụta, space akara technology na electronic technology na ndị ọzọ ọzụzụ, ugbu a, ọ bụ na-ekpo ọkụ ntụpọ nkịtị nchegbu nke sayensị & technology ubi na ulo oru okirikiri, ma na ulo ma na ofesi. N'ihi na ihe karịrị afọ 50, laser nhazi na ngwa-emepe emepe ngwa ngwa, ka jikọtara na ọtụtụ ọzụzụ na-etolite a ọnụ ọgụgụ nke ngwa gbara akwụkwọ, na laser isi nhazi teknụzụ na-agụnye: laser ọnwụ, laser ịgbado ọkụ, laser marking, laser mkpọpu ala, Laser okpomọkụ ọgwụgwọ, laser ngwangwa prototyping, laser mkpuchi na na.
Teknụzụ ịchacha laser bụ ngwa bụ isi nke teknụzụ laser na ụlọ ọrụ. Ọ na - eme ka mgbanwe nke ụlọ ọrụ nhazi ọdịnala dị ngwa ma na - enyekwa ụzọ ọhụrụ eji arụ ọrụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. Ọ ghọọla ebe a na-ejikarị usoro nhazi laser na mpaghara nhazi ụlọ ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-eji teknụzụ na-egbu laser n'ọtụtụ ebe n'ichepụta ihe eji arụ ọrụ, ihe owuwu mmiri, nhazi akwụkwọ mpempe akwụkwọ, ụgbọ mmiri na nrụpụta ụgbọala, ụlọ ọrụ eletriki na eletriki, ụgbọelu na mbara igwe na ụlọ ọrụ akụ na ụba mba ndị ọzọ. Na-aga n'ihu na-enwe ọganihu nke sayensị na nkà na ụzụ na ngwa, laser ọnwụ technology ga-n'ihu n'ime ndị ọzọ ebe.
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, teknụzụ nhazi laser na-emepe ngwa ngwa. Ngwa ya na-adịwanye ọtụtụ ebe. ya mere a maara laser dịka "akụrụngwa nhazi ụwa niile" yana "usoro nrụpụta ọdịnihu ga - apụtakarị". Advanced ulo oru mba 'mmepụta technology na-eme ka a qualitative mgbanwe n'ihi na nke ọtụtụ ngwa nke laser nhazi technology. Laser ọnwụ technology bụ isi ngwa nke laser technology na ụlọ ọrụ. O meela mgbanwe nke ụlọ ọrụ nhazi ọdịnala ma nye ụzọ ọhụrụ nke nhazi ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. Ọ ghọọla usoro nhazi laser kachasị n'ọtụtụ ebe na mpaghara nhazi ụlọ ọrụ, nke nwere ike ịnwe ụlọ ọrụ nhazi laser niile karịa 70%.
Laser ọnwụ bụ ojiji nke lekwasịrị anya elu ike njupụta laser doo irradiating na workpiece. N'okpuru ogige nke oke ọnụ ụzọ laser nke njupụta ike laser, ike ọkụ laser na gas na-arụ ọrụ na-enyere aka belata usoro ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na-etinye uche na ya. The okpomọkụ nke laser edinam mgbe adahade sharply na mgbe esi ebe ahụ ruru, ihe onwunwe na-amalite gbazee na iche-iche onu. Na ikwu ije nke ìhè doo na workpiece, ihe na-akpatre hiwere n'ime a nchawa. The sedimenti na gbawara agbawa na-fụọ site a ụfọdụ inyeaka gas.
Laser ọnwụ nwere ọtụtụ uru dị ka dịgasị iche iche nke ọnwụ, ọnwụ ọsọ, gbawara warara, ezi ọnwụ àgwà, obere okpomọkụ emetụta mpaghara, gbakwunyere mgbanwe na wdg Ndị a uru ndidi a nnọọ dịgasị iche iche nke ngwa na oge a na ụlọ ọrụ. Laser ọnwụ nkà na ụzụ na-aghọkwa otu n'ime ndị kasị na-eto teknụzụ na laser nhazi technology. E jiri ya tụnyere ndị ọzọ ọkụ, ebe a bụ ụfọdụ atụmatụ dị ka ndị a:
1. Akwa ihie
2. Ntuziaka dị elu
3. Elu monochrome
4. Nnukwu nnabata
Ọzọkwa n'ihi atụmatụ anọ ndị a, e jiri ya mee ihe n'ọtụtụ ebe, ma weta atụmatụ bara uru maka nhazi usoro ọdịnala na usoro nhazi laser:
(1) Ebe ọ bụ na ọ dịghị kọntaktị nhazi, na laser doo ike na ije ọsọ bụ kemeghi. Yabụ ị nwere ike nweta nhazi dị iche iche.
(2) Enwere ike iji ya rụọ ụdị igwe dị iche iche, na-abụghị nke ọla. Karịsịa, enwere ike ịhazi ya nnukwu ike, nnukwu brittleness na agbaze agbaze nke ihe ahụ.
(3) E nweghị "ngwá ọrụ" na-eyi n'oge laser nhazi, na ọ dịghị "ịcha ike" na-eme na workpiece.
(4) Laser nhazi nke workpiece okpomọkụ emetụta mpaghara bụ obere, obere deformation nke workpiece, soro-elu obere ego nke nhazi.
(5) The laser ike hazie ndị workpiece na mechiri emechi akpa site na uzo ọkara.
(6) laser dị mfe ịduzi. enwere ike iru ya na uzo nke mgbanwe site n’ilekwasị anya. Ọ dị mfe ịkwado usoro CNC maka nhazi akụkụ dị mgbagwoju anya. Ya mere, laser ọnwụ bụ nnọọ mgbanwe ọnwụ usoro.
(7) Laser nhazi nwere nnukwu mmepụta arụmọrụ. Nhazi nhazi kwesiri ike ma buru ihe kwesiri ntukwasi obi, uru aku na uba.
Ebumnuche anyị inye teknụzụ ndị bụ isi na usoro ntinye ahaziri ahazi maka ụlọ ọrụ 4.0 na ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi, na-enyere ụlọ ọrụ aka iji ọtụtụ ohere na-esite na afọ dijitalụ mee ihe n'ụzọ zuru oke.
2-804, Fenghuang okporo ụzọ, Jinan, Shandong, China